Ra’iisul wasaaraha Yahuuda oo dacwado lagu soo oogay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Ra’iisul wasaaraha Yahuuda oo dacwado lagu soo oogay
Ra’iisul wasaaraha Yahuuda oo dacwado lagu soo oogay
Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu oogay dacwado la xiriira laaluush, khiyaameyn iyo kaslooni lumin sidda uu sheegay Dacwad oogaha ugu sarreeya Israel.
Netanyahu ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu faro-gelin ku sameeyey hay’adaha sharci dejinta dalka, isaga oo matalaya laba shirkad oo warbaahineed, taasi oo uu dhaafsaday in warar wanaagsan laga baahiyo.
Dacwadahan ayaa waxa ay xuduntoodu tahay eedeymo ku saabsan in ra’iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay qaateen dhayman, sigaar iyo khamro qiimahooda dhan yahay 260,000 oo dollar iyo hadiyado kale oo ay ku bedesheen ayaga oo fulinaya dano siyaasadeed.
Waa markii ugu horreysay taariikhda Israel oo ra’iisul wasaare xafiiska fadhiya lagu soo oogo dacwado la xiriira eedeymo dambiyeed.
Netanyahu oo Israel hoggaaminayey 13 sano ayaa baaritaanka ka dhanka ah ku qeexay “isku day afgambi.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur 22-11-2019
Next articleShir looga hadlayay Horumarinta dhaqaalaha oo ka furmay Kampala